Mogadishu Journal » 2018 » May » 13
Khayre “Waa inan dhameystirnaa Dastuurka si dalka aan u gaarsiino….”
Mjournal :-Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay Shir-weynaha Qaran ee Dastuurka ee taariikhiga ah oo ay ka qaybgalayaan in kabadan 350 qof oo isaga kala yimid gobolada iyo dalka dibadiisa. Shirka mas’uuliyiintii ka qayb gashay waxaa kamid ahaa Ku-Simaha Madaweynaha...
Madaxwynaha Soomaaliland oo la kulmay Keating
Mjournal :-Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta kulan la yeeshay ergayga gaarka ah ee xog-hayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Mr Michael Keating. Kulankan uu madaxweyne Muuse Biixi la qaatay danjire Michael Keating, ayaa waxa ku...
Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo u ambabaxay Qadar
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaalia Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Wafdi uu hoggaaminayo ayaa goor-dhow u ambabaxay Magaalada Dooxa ee Dalka Qadar. Mudane Maxamed C/llaali Farmaajo oo magaalada Dooxa uga bilabaneyso Booqasho rasmi ah oo qaadaneyso...
Shirweyne Heer Qaran ah oo goor dhaw ka furmay Muqdisho
Mjournal :-Ku simaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaiya ahna Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa maanta daah furay Shirweynaha Qaran ee geeddi socodka Dib U eegista Dastuurka, oo socon doona ilaa 15-ka Bishaan. Shirweynahaan...
Mjournal -Xarakada Al-shabaab ayaa sheegtay in Ciidanka Turkiga ee jooga Soomaaliya ay dagaal ku soo qaadeen Soomaaliya islamarkaana ay la dagaallamayaan. Afhayeenka dhinaca howlgallada Al-shabaab C/Casiis Abuu Muscab ayaa sheegay in Askarta Turkiga ah aysan Al-shabaab uga...
Madaxda maamul gobolleedyada oo shir ku yeelanaya Muqdisho
Mjournal :-Waxaa magaalada Baydhabo ka socda qaban qaabada shir ay yeelanayaan Madaxda maamul goboleedyada, kaasoo noqon doona shirkii labaad oo ay isugu yimaadaan, tan iyo markii sanadkii la soo dhaafay la aas aasay Gole ay ku mideysan yihiin maamul goboleedyada oo lagu dhisay...
Madaxweyne Farmaajo oo maanta ku sii jeeda magaalada Doxa ee dalka Qatar
Mjournal :-Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta ku sii jeeda magaalada Doxa ee dalka Qatar, halkaasoo uga bilaaban doonta booqasho rasmi oo socon doonta labo cisho. Amiirka dalka Qatar ayaa casuumaad rasmi ah u soo diray...
Shirweynaha Qaran ee dib u eegista Dastuurka oo maanta ka furmaya Muqdisho
Mjournal : -Shirweynaha Qaran ee dib u eegista Dastuurka ayaa maanta ka furmaya magaalada Muqdisho, kaasoo ay ka qeyb galayaan illaa saddex boqol oo Ergo ka socota Bulshada Soomaaliyeed oo ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Shirkan oo maanta oo ku beegan 13 bisha May...